Waxsoosaarka Kalluunka & Kaluunka News and Stories by Alietc.com - Alietc.com
U Isticmaalida Kiimikooyinka Sunta Ah in Lagu Ilaaliyo Kalluunka
Ganacsatada ka ganacsata cunnooyinka Afrika waxay adeegsadaan kiimiko sun ah si ay u ilaashadaan kalluunka iyo hilibka. In kasta oo kiimikooyinkani ay khatar ku yihiin silsiladda cuntada ee dadka, haddana dawladuhu waxay si aan caqli-gal ahayn u iloobeen saamaynta halaagga ah ee walxahaas sunta ahi ku leeyihiin dadka. Wakiilka waaxda ee Wasaaradda Xannaanada Xoolaha, Kalluumeysiga iyo Warshadaha Xoolaha (MINEPIA), Serge-Claire Nkolo, ayaa sheegay in kalluumeysatada [Read More
Halkee laga Heli Karaa Ganacsade sumcad leh oo ku saabsan Kalluunka King Fresh
in alaab-qeybiye dukaankayga isboortiga maxalliga ah (iyo supermarket) uu lahaa xulashada ugu weyn ee kalluunka, laakiin kaliya ay haysteen dhowr alaab-qeybiyeyaal oo ay kala doortaan. Baahnayn in la iraahdo, iyagu aad uma aysan jeclayn kalluunkeyga waxaana laga yaabaa inay jiraan culeysyo dad kale oo aniga oo kale ah. Waxaas oo dhami waa wax laga xumaado oo sida […]Read More
Cunnooyinka Cunto ee Barafaysan - Cunnooyinka badda ee aan lahayn Fuss!
Caleenta badda ee la qaboojiyey ama la kariyey maaha wax ay tahay inaad joojiso cunista. Waa mid nafaqo leh oo aad u fudud in la diyaariyo. Markii aad wax ka iibsaneysid sahayda badweynta ee barafaysan, hubi inaad weydiisato labadaba ceeriin iyo wax la kariyey. Maadaama ay dhif tahay inaad hesho tafaariiqle kaliya qaada alaabooyinka la qaboojiyey, kuwa la kariyey, […]Read More
Waxaa laga yaabaa 22, 2020 0 comments
Sida loo Xulo oo loo Dalbo Kalluunka Shidaalka Kalluunka
Ma taqaanaa sida loo doorto oo loo dalbado kalluun cusub oo koox koox ah? Kalluumeysato badan ayaa u maleynaya in sababta oo ah waxay yaqaanaan magaca dukaan ama kalluumeysi, ay kalluunka ka dalban karaan ujeeddo kasta ha noqotee, laakiin qaar badan oo kalluumeysato kalluumeysi cusub ah ayaa dhab ahaantii sameeya filleyaal u gaar ah oo ay gooni u iibiyaan. Hadaad rabto inaad…Read More
Xagee Iibsan Kartaa Cunno kale oo Cusub ama Midab Shidan leh
Ma rabtaa inaad wax ka iibsato supermarket mise waxaad rabtaa inaad raacdo bixiye kale? Sidee ku saabsan sida loo goosto cuntada badda? Faa'iidooyinka caafimaad ee kalluunka Seafood waxaa ku jira borotiin, fitamiin D, selenium, fosfooraska, iodine, birta, fiitamiinnada B, iyo omega-3 fatty acid. Faa'iidooyinkiisa caafimaad ee gaarka ah, kalluunka waxaa lagula talinayaa dadka […]Read More